Ka Ogow 5 qodob Shirka Jaraa'id & RW Rooble -
Maareeyayaasha, Agaasimayaasha, Shaqaalaha Warbaahinta Dowladda iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ayaa ka soo qeyb galay kulanka oo uu soo qaban qaabiyay Xafiiska Raysul Wasaaraha.
Salaan iyo kaftan ka dib, R / wasaare Max’ed Xussein Rooble oo ahaa shaqsigii ugu dambeeyay ee ka soo qeyb galay kulanka ayaa ka sheekeeyay waayahiisa siyaasadeed iyo shaqadiisa, taariikhdiisa iyo doorkiisa hooyo kaligeed ah. Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa is weydaarsaday kaftan iyo faallooyin u badnaa nolosha caadiga ah.
Raiisel wasaare Rooble wuxuu kala soo qayb galayaashii kala hadlay arimaha doorashooyinka iyo saxaafada, wuxuuna xusay muhiimada ay leedahay doorka saxaafada ee xiliga doorashada, ka dibna wuxuu ka codsaday agaasimayaal dhowr ah inay la wadaagaan kalfadhiga xaalada siyaasadeed, doorashooyinka iyo horumarka Puntland iyo Hogaamiyayaasha dowlad gobaleedka Jubbaland. .
Wuxuu isweydiiyay sida ay warbaahintu ugu qanacday isbarbardhiga 8 magaalo oo diyaar u ah doorashada iyo 3 magaalo oo aan diyaarsaneyn. Saxafiyiinta qaar waxay galeen tirada guud ee magaalooyinka loogu talagalay doorashooyinka, kuwaas oo ah 5 maamul goboleed midkiiba. Al-Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, waxayna sheegeen inay u aargudayeen go’aanka Kenya ay ciidamadeeda ugu dirtay Soomaaliya si ay ula dagaallamaan falaagada Al-Shabaab.
Raiisel wasaaraha ayaa ka hadlay socdaalkiisa iyo wadahadaladii dhexmaray isaga iyo Siciid Deni, madaxweynaha dawlada Puntland. Wuxuu si qoto dheer uga hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida Deni u diiday dhamaan soo jeedintiisii. Wuxuu ka hadlay dadka reer Puntland iyo sida uu ugu wargaliyay Hogaamiye Deni oo uu kala hadlayo.
Wuxuu sheegay in wax walba ay leeyihiin Master, sheekada Mucaaradka iyo musharixiinta waxaa iska leh Ustaad Siciid Deni, mudadaas oo uu si xamaasad leh uga hadlay xiriirka dowlada dhexe iyo Puntland, hanaanka iyo heshiiska siyaasadeed ee doorashada wuxuu ahaa wadada dheer. wuxuu xusay doorka Siciid Deni ee qoritaanka heshiiska
Wuxuu soo qaatay qodob muhiim ah markii uu kahadlayay DG Jubbaland, gobolka Gedo oo kamid ah arimaha ugu muhiimsan ee muranka ka taagan doorashada 2021, wuxuu sheegay inay jiraan masters-ka uusan dhihi karin waa ku qarsoon yihiin sheekada gobolka Gedo, heshiis ma ahan Wuxuu yiri wax baa laga ogaa laakiin markii dambe wuu diiday Axmed Madoobe markii la weydiiyay sababta uu ugu sheegay inuu baxo. fikir iyo waxay noqotay wax aan macquul aheyn.
Mucaaradka & Midowga Musharaxiinta
Ma filan karo in aan noqdo masuulka iyo mas’uuliyadda Ra’iisul Wasaaraha, wuxuu wax ka qaban doonaa arrimaha musharixiinta siyaasadeed, in kasta oo uusan musharrax ahayn, haddana markii ay hadlayeen musharrixiintu waxay adeegsadeen lahjad qaawan oo aan haba yaraatee wax diblomaasiyadeed lahayn, bililiqo hantiyeed bililiqo hantiyadeed, dhul badeed ka dhacay Galmudug iyo ceebo kale oo waaweyn.
Hadalkiisa ayaa kallifay qaar kamid ah kaqeybgalayaasha in ay su’aalo weydiiyaan laakiin wasiirada qaar ayaa isku dayay in ay xakameeyaan ama hagaan kulanka, inkasta oo ay sheegeen in kulanku uu ahaa kaliya isbarasho iyo casho laakiin su’aalaha ayaa sii socday, qaar kamid ah maamulayaasha warbaahinta ayaa sidaas yidhi. Raiisel wasaaraha ayaa laga soo xigtay inuu yiri qaar baa seegay waqtigii loo qabtay inay ku qabsoonto doorashada.
Galmudug & Hirshabeelle
Bayaan ay ka qeybgalayaasha qaar la yaabeen kuna riyaaqeen qaar kale markii ay ka hadlayeen Galmudug & Hirshabeelle.
Raiisel wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa khudbad ka jeediyay kulanka: Ayaa yirii “Baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay 329 xubnood, weligaa ma isweydiisay sida ay u qeylinayaan Galmudug iyo Hirshabelle? Waa 12% oo inta aamusnaanta ku jirtana waa 88% hadana way qaylinayaan. ”
Qaar ka mid ah saxafiyiinta ayaa la yaabay khudbada ra’iisul wasaaraha, laakiin intaas kuma uusan ekaanin.
Si loo saxo Galmudug iyo Hirshabeelle, labada aqal ee baarlamaanka waxay leeyihiin 89 xubnood. Tirada kuraasta labada aqal ee baarlamaanka, oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo ah mudane sharafeed baarlamaanka, waa 330, sidaas darteed Galmudug iyo Hirshabeelle waa 27% tirada guud ee Baarlamaanka.
Rugta Ganacsiga & Warshadaha
Hadalka Mr Rooble ayaa yimid xili la hadal hayay kala dirista Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha oo ay kala dirtay Wasaarada Ganacsiga iyo Warshadaha bishii Diseember 2020. Wuxuuna sheegay inuusan waxba kala socon kala dirista Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha. wuxuu ku jiraa hawshii xalinta iyo dhameystirka.
“Sidaad ogtahayba waxaan soo saaray wareegto, hadaad xasuusato waxaan dhihi lahaa yaan talaabo la qaadin iyadoo aan laga warqabin xafiiska raiisul wasaaraha. Waxaanse rajaynayaa in xalkaani dhamaan doono.
This Micro organism Lurking in Your Intestine Might also Aggravate COVID